दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी - Everest Dainik - News from Nepal
दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्छः राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै दललाई मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गरेकी छन्। संविधान दिवसका अवसरमा गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। केही प्रावधान कार्यान्वयन भइसकेका छन्। त्यसैले दलहरूले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।’ उनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सुशील कोइरालाले दिएको योगदानको चर्चा गरेकी थिइन्।
कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दलको शालीनतालाई सरकारले कमजोरीका रुपमा लिएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका सभापति देउवाले जिम्मेवारपूर्ण प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा सरकारले हेपेको भन्दै आक्रोश पोखे।
‘संविधान प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ। संविधान जति राम्रो भए पनि यसको प्रमुख पक्ष कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा संविधानको मर्मविपरीत हुने विधेयक ल्याएर लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती थप्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले रेलिङ भाँचेका छैनौं। कुर्सी तोडेका छैनौं। केही गरेन भनेर हामीलाई हेप्ने ? ’
उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेसलाई भयको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘लेख्ने र बोल्ने अधिकारमाथि प्रहार भएको छ। मिडियामाथि भयको सिर्जना गरिएको छ। एउटा पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत ल्याउन खोजिँदैछ। यस्ता विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौं।’
;+ljwfg lbj;sf] cj;/df z’qaf/ sf7df08f}+ 6’l8v]ndf cfof]lht ;df/f]xdf ;xeflu x’b} /fi6«klt ljwfb]lj e08f/L nufotsf ljlzi6 Joltmx? . tl:a/ bLk]g ]i7
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारले निजामती र सुरक्षा निकायमा राजनीतीकरण गर्न खोजेको दाबी गरे। ‘कर्मचारी, सेना, प्रहरीमा राजनीति गर्न खोजिएको छ। जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीलाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाउन खोजिएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको छ। जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई पार्टी कार्यकर्ता बनाउन मिल्छ? ’ उनले प्रश्न गरे।
कार्यक्रममा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान समझदारीको दस्तावेज भएको भन्दै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए। उनले संविधान कार्यान्वयनमा सबै दल एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘समझदारी र सम्झौताको दस्तावेज हो यो। केही असन्तुष्टि हुन सक्छन्। असन्तुष्टिका बाबजुद हामीले संविधान बनाएका छौं। जनताको मन जितेर यसलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने ठाउँ बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो छ, त्यसलाई पन्छाऔं। प्रधानमन्त्रीज्यूकै शब्दमा भन्ने हो भने कुनै ठाउँमा मिलेको छैन, त्यसलाई मिलाऔं। संविधान निर्माण गर्ने दलहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिए। उनले संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका महत्र्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारलाई संविधानको मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरे। ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको अग्रसरता सत्तापक्षले लिने हो। लोकतन्त्रमा त्यो सत्तालाई शक्तिशाली मानिन्छ, जसले कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्छ।’प्रतिष्ठानका सभापति एवं सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि संविधान लकार्यान्वयनमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरे।
प्रतिष्ठानले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त गणेशमान सिंह जनआन्दोलन स्वर्ण पदकबाट विभूषित गरिएको थियो। सम्मान कोइरालाका भाइ अशोक कोइरालाले लिएका थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: दलहरू, विद्यादेवी भण्डारी